ပစ်မှတ်ပစ္စည်းသည်မြန်နှုန်းမြင့်စွမ်းအင်အမှုန်များဖြင့်တရစပ်ပစ်မှတ်ထားသောပစ်မှတ်ဖြစ်သည်. ၎င်းကိုစွမ်းအင်မြင့်လေဆာလက်နက်များတွင်သုံးသည်. လေဆာရောင်ခြည်နှင့်မတူသောအခါ densities ဖြစ်သည်, ကွဲပြားသော output waveforms များ, ကွဲပြားခြားနားသောလှိုင်းအလျားများသည်ကွဲပြားသောပစ်မှတ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်, different killing and destruction effects will be produced. .ဥပမာ: Evaporative magnetron sputtering coating သည်အပူအငွေ့ပျံစေသောအပေါ်ယံလွှာဖြစ်သည်…အလူမီနီယံဖလင်, စသဖြင့်ကွဲပြားသောပစ်မှတ်ပစ္စည်းများအစားထိုးပါ (aluminium ကဲ့သို့, ကြေးနီ, အစွန်းခံသံမဏိ, တိုက်တေနီယမ်, နီကယ်ပစ်မှတ်, စသည်တို့) ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ရှင်စနစ်များကိုရယူရန် (super-hard ကဲ့သို့, ခံနိုင်ရည်ရှိသည်, anti-corrosion အလွိုင်းရုပ်ရှင်, စသည်တို့).
အကြို: sputtering ပစ်မှတ်၏ magnetron sputtering ၏နိယာမ
နောက်တစ်ခု: magnetron sputtering sputtering ပစ်မှတ်၏အခြေခံမူ